Wang Yi-ga Shiinaha oo Safar aan la qorsheyn ku tagey Kenya sii uu ugu Qalbi Qaboojiyo
By AxadleTM On Jan 15, 2020 Last updated Jan 15, 2020
Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa waxaa qasab ku noqotey inuu si lama filaan ah ugu sii hakado Kenya xilli dalka bariga Afrika uu taageero u raadinayo isku daygooda ah inuu xubin joogto ah ka noqdo Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, Inkastoo shiinuhuu ay door bidaayaan Jabuuti.
Kenya kuma aysan jirin safarkii hore loo qorsheyey ee Wang ee Afrika, Sidaa hore ugu qorsheysneyd waxaay aheyd in uu socdaal ku maro dalalka Masar, Jabuuti, Ereteriya, Burundi iyo Zimbabwe, Wasiirlka arrimaha dibedda Shiinaha boqashadiisa ka soo bilaabay masaar sanadkan.
Laakiin Jimcihii, Wang wuxuu ka duulay magaalada Jabuuti ee Dalka Jabuuti isaagoo ku sii jeeday magaalada xeebta ku taal ee Kenya wuxuuna wadahadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma.
Wuxuu sidoo kale booqday Xaruunta Dhabadda Xadiidka ee isku xirta Mombasa iyo caasimada Nairobi, oo lagu maalgeliyey Mashruuca logu magac darey Suunka iyo Isku Xidhaka Horumarka wadooyinka [Belt and Road Initiative] – Qorshaha oo ah mid malaayin lacag ku kacaya ee Beijing ay maalglineyso kaas ooiksu xiraaya Yurub iyo Afrika iyada oo loo marayo maal-gashiga kaabayaasha dhaqaale.
Booqashada uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Kenya waxaay timid kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in Beijing ay taageeri doonto oo ay xaga dambe ka riixeyso Jabuuti sidii ay kursi aan joogto ahayn ee Golaha Amniga ay uu heli laheyd, tallaabadaas oo khalkhal gelisay Xukumadda Nairobi.
Saddexda dal oo Afrikaan ah ba waxay marwalba la siyaa kusriga aan joogto ahayn Golaha Amniga, mid walbaa wuxuu u baahan yahay codadka saddex-meelood laba meel tirada guud ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Niger iyo Tunisia ayaa loo doortay bishii Juun ee la soo dhaafay inay metelaan qaaradda 2020-21, iyagoo badalaya Ivory Coast iyo Equatorial Guinea. Kenya iyo Jabuuti ayaa u tartamaya sidii ay u baddali lahaayeen Koonfur Afrika bisha Janaayo ee soo socota.
Kenya ayaa ku guuleysatay taageerada Midowga Afrika bishii Agoosto ee la soo dhaafay, iyadoo kaga badisaay Jabuuti codad gaaraya 37 cod illaa iyo 13. Jabuuti ayaa aqbashay in laga adkaaday laakiin markii dambe waxay sheegtay in howshaasi ay Waxba kama jiraan ay aheyd oo ay billawday olole ay kula tartamayso Kenya kursigaas oo aysan ka qusaan wali.
Wang wuxuu u sheegay Juma: “Shiinaha wuxuu ka taageerayaa Kenya inay door muhiim ah ka cayaarto arrimaha gobolka ee Afrika, waxaynu taageeeyna dadka afrikaanka ah si ay u xalliyaan dhibaatooyinka gudahooda qaab Afrikaanimo ah, Waxayna ku taageereyna qaarada Afrika sidii ay uga rumeyn lahaayeen aragtida ah in la tirtiro faqriga iyo saboolnimadda sida ugu dhaqsaha badan. ”
Juma ayaa Shiinaha uga mahadcelisay taageeradeeda muddada fog iyo taageerada ay ka siiso horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada Kenya, iyo doorka wax ku oolka ah ee ku aaddan horumarinta nabadda ee Qaradda Afrika.
Kenya iyo Jabuuti labaduba waa xulafada waaweyn ee Shiinaha, oo hoyga u ah Mashaariicda Shiinaha uu maalgeliyo sidaa mashruucyada waddooyinka taareemadda iyo dekadaha – Haddaba Taani waxaay uu keentay in ay ku adkaato in ay shaaciso ciida ay Beijing ku taageereyso kursiga Qaramada Midoobay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Wang uu u duulay Kenya si uu ugu caddeeyo arrinta oo uu uga fogaado inuu hal dhinac ay taageeraan.
Ka hor inta uusan u safrin Mombasa, Wang wuxuu Khamiistii la soo dhaafay la yeeshay kulaan Madaxweynaha Jabuuti Ismacil Cumar Geelle iyo Wasiirka Arimaha Dibada Maxamuud Cali Yuusuf. Wang wuxuu usheegay in jabuuti ay tahay “mid la isku halleyn karo oo muddo dheer ay wada shaqeyn karaan”, kulanka kadib Geelle xafiiskiisa wuxuu soo dhigay bartiisa twitter-ka uu ku leyiihiin qoraal muujinaya in China ay taageeri doonto dalabkeeda ku aadan kursiga Qaramada Midoobay.
Bishii la soo dhaafay, Wakiilka gaarka ah ee Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, ahna Wakiilka Gobolka, Wang Yong, wuxuu ka dhawaajiyey in Beijing ay diyaar u tahay inay taageerto dalabka Kenya. “Waxaan si adag u taageersanahay dib u habeynta Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay waxaana aaminsanahay in Kenya ay gacan ka geysan doonto sare uu qaadista codka dalalka Afrika,” ayuu yiri.
Laakiin hadalkii Wang Yong ayaa markii dambe laga tirtiray website-ka xafiiska madaxtooyada Kenya. Safaarada Shiinaha ee Nairobi ayaa sheegtay in kursiga UN-ka uusan qeyb ka aheyn wadahadalada bishii Diseembar, ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha Shiinaha ay fahansanyihiin in ereyada ergayga si khaldan loo fasiray.
Isniintii, Macharia Kamau, oo ah xoghayaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya, ayaa sheegay in warbixinnada Jabuuti ee sheegashadda inay xaqiijisay taageerada Shiinaha ay tahay in la iska indhatiro, laakiin waxaan qireynaya in “Shiinaha oo keliya ay go’aansan karaan” waddanka, ay ku taageri doonaan kursiga.
Stephen Chan, oo bare ka ah Jaamacadda London afka qalad lagu yirahdo [School of Oriental and African Studies,] ayaa sheegay in Kenya lagu soo daray daqiiqada ugu dambeysa safarka si logu niyad qaboojiyo kenya oo uu Shiinuhu tusiyo in uu qimeyeen iyaado dhan kale ay barbar socdaa taageeradda uu u haayo Jabuuti iyo Ereteriya, oo ah dalal dhaca xeebta bari ee Afrika. Shiinaha ayaa la sheegayaa inay u badan tahay iney ka fogaadan eex.
Dhabadda Tareenka ee Keny, wuxuu qarash ahaan ku kacay 4.7 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, oo ay maalgaliso Bangiga Exim ee Shiinaha, halka Jabuuti ay hoy u tahay maalgashi kaabayaasha Shiinaha ee ku kacaya dhowr bilyan oo ay ku jiraan dekedaha, jidadka tareemadda iyo saldhigga millatari ee ugu horreeyay ee Shiinaha ee uu dibadda ku yeesho. Djibouti waxay ku taal Geeska Afrika, waxayna xarun u tahay militariga shisheeye, oo ay ku jiraan kuwa Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Japan.
Haddba Shiinaha ayaa uu Muqda mid sii qarsoodi ah ugu codeyn doono dalka uu is leyahay Kama marantiid